Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 27
Moa ve tsy inoan'ny finoana fa afaka manidina ny Atlanteans? Raha eny, aiza no misy ny finoana toy izany?
I Plato angamba no voalohany nahafantatra ny tontolo tandrefana niaraka tamin'ny kaontinanta Atlantika very. Ny hafa manaraka azy dia nandray ny lohahevitra ary naneho hevitra momba ny tantara izay nomeny ho avy amin'ny Solon razambeny, izay nilaza fa efa namindra azy io avy amin'ireo pretra taloha tany Egypta. Angano maro no nidina tamin'ny endriny samihafa, any amin'ny nosy na kontinanta Atlantis. Bacon no nanoratra momba izany, fa ny boky malaza indrindra dia ny Ignatius Donnelly: “Atlantis; Ilay Tontolo Antediluvia. ” Tsy mieritreritra izahay fa nisy na iza na iza nanoratra momba an'i Atlantis, niresaka zavatra momba ny fivoaran'ny fiaramanidina, na ny fahaizan'ny Atlanteans manidina.
Raha tsy efa namoaka ny «Raharaha Fotopampianarana» i Madame Blavatsky tamin'ny taona 1888 dia tsy nisy niresaka momba ny Atlanteans sy ny sidina fotsiny. Ao amin'ny Madame Blavatsky, "Madika Blavatsky, dia nilaza fa, miaraka amin'ny Atlanteans, ny fisian'ny zotram-piaramanidina dia zava-misy ary nanome tantara izy mikasika ny antony nahatonga ny fianjeran'i Atlantis sy ny fomba nandehanan'ny rivotra ny anjara toerana lehibe tamin'ny fahalavoana. Madame Blavatsky dia tsy mitaky ny mari-boninahitry ny fahitana ity ho an'ny tenany. Hoy izy ao amin'ny "Sekretera miafina" izay nolazainy fa nomena azy avy amin'ny tena tantaran'ny Atlantis, nalaina tao amin'ny firaketin'ireo lehilahy hendry izay nanjary tsy mety maty ary mitana sy manohy ny tantaran'ny fisondrotana sy ny fahalavoana. kaontinanta sy ny fiovana ara-jeolojika ary fiovana hafa eto ambonin'ny tany, mifandraika amin'ny fampandrosoana ara-pirazanana iraisan'ny zanak'olombelona ary ny fiakaran'ny fanjavonan'ny sivilizasiona mandritra ny fotoana rehetra. Ny mpanoratra ny fanontaniana sy ny hafa izay tsy ho azon'ny “Fotopampianarana miafina” dia ho liana amin'ity lohahevitra manaraka ity avy amin'ny asa:
“Avy amin'ny hazakazaka fahefatra no nahalalan'ny Arikanina voalohany ny 'fomban'ny zava-mahatalanjona», ny Sabha sy Mayasabha, voalaza ao amin'ny Mahabharata, fanomezana ny Mayasura ho an'ny Pandavas. Avy amin'izy ireo no nahalalan'izy ireo ny aeronautika, Viwan, Vidya, ny 'fahalalana momba ny manidina amin'ny fiaramanidina fiaramanidina,' ary noho izany, ny kanto kanto misy azy ireo momba ny Meteorography sy Meteorology. Avy amin'izy ireo ihany koa no nandovan'ny Aryanna ny lanjany sarobidy indrindra momba ny toetra tsara miafina amin'ny vato sarobidy sy vato hafa, ny Chemistry, na Alchemy, Mineralogy, Geology, Fizika ary Astronomy. ” (3d. Vol. II., P. 444.)
“Ity misy sombin-tantara tamin'ny tantara teo aloha:
''. . . Ary ny 'Ilay Mpanjaka be tarehy manelatrelatra,' ilay lohan'ny Zavaboary rehetra dia nalahelo, nahita ny fahotan'ireo mainty tarehy.
“'Nandefa ny fiaramanidina (Vimanas) ho an'ireo lohan'ny rahalahiny izy (lehiben'ny firenen-kafa sy foko) niaraka tamin'ny lehilahy ratsy fanahy tao anatiny, nanao hoe: Miomàna. Mitsangàna, ianareo lehilahy amin'ny lalàna tsara, ka mità amin'ny tany maina (nefa mbola maina).
“'Tonga ny Tompon'ny tafio-drivotra. Efa antomotra ny kalesin'izy ireo. Indray alina sy roa andro dia ny Tompon'ny maizina (Sorcerers) ihany no honina ao amin'ity tanin'ny marary ity. Voaheloka izy, ary tsy maintsy hiara-mandeha aminy izy ireo. Ny Lords of the Fires (the Gnomes and Fire Elementals) dia manomana Agnyastra majika izy ireo (fitaovam-piadiana novokarin'ny Magic). Fa ny Tompon'ny maizina ("maso ratsy") dia matanjaka noho izy ireo (Elementals) ary andevon'ireo mahery izy ireo. Izy ireo dia manam-pahaizana amin'ny Astra (Vidya, ny fahalalana majika avo indrindra). Avia ary hampiasa anao (izany hoe ny herinao majika, mba hanoherana ny an'ny Sorcerers). Avelao ny Tompon'ny tarehy manjelanjelatra (Adept of the White Magic) hampiakatra ny Vimana amin'ny Tompon'ny Fahazavana maizina mba ho tonga eo an-tanany (na fananany) ny Vavahadin'ireo mpanao fankahalana, fandrao hisy afaka manafaka amin'ny rano alaviro ny bavon'ny Efatra (andriamanitra Karmic), ary vonjeo ny olon-dratsy (mpanaraka azy na olony). ' ". (Ibid, p. 445.)
“(Fa) ny firenena izao dia efa niampita ny tany maina. Izy ireo dia mihoatra ny fantson'ny rano. Nahita azy ireo tany Vimanas ny mpanjakany, ary nitondra azy ireo nankany amin'ny tanin'ny afo sy ny metaly (Atsinanana sy avaratra). ' "
«'Dia nisondrotra ny rano ka nanarona ireo lohasaha hatrany amin'ny faran'ny tany ka hatrany amin'ny farany. Nijanona ny tany avo, maina ny tany ambanin'ny tany (ny tanin'ny antipoda). Tao no nitoetra izay afa-nandositra; ny lehilahy amin'ny tarehy mavo sy ny maso mahitsy (olona mahitsy sy mahitsy)
«'Rehefa nifoha ny Tompon'ny haizina dia nieritreritra ny Viwana izy ireo mba handosirany ny rano miakatra. ". (ibid. p. 446.)
Moa ve ireo olona izay miezaka ny mamaha ny olana momba ny fiaramanidina avaratra, reincarnated Atlanteans?
Raha ny tokony ho izy dia maro amin'ireo eritreritra izay niasa tamin'ny vatan'ny Atlantean no niseho indray tamin'ny sivilizasiona izay namboarina ankehitriny, ity sivilizasiona ity dia manana ny ivon-tanany eto Etazonia miaraka amin'ireo rantsany sy ny fanenon-tena izay hatrany amin'ny faritra rehetra eran'izao tontolo izao. Azo antoka fa ny mpamorona ny vanim-potoana dia ireo saina izay niasa na nampianarina tao amin'ny siansa Atlantis ary nahatonga azy ireo hamorona zava-bita mitovy amin'ny vanim-potoana izay nahalalanay azy tao Atlantis. Anisan'ny noforonina ny manidina. Ny mety hisidina an'ny olona, ​​na ny fitetezan'ny rivotra, dia nohesoina sy nohesoina tato anatin'ny fotoana izay, ary na dia ny saina "siantifika" aza dia naneso ilay soso-kevitra na niresaka azy io ho toy ny igasy fatuus na ny finoanoam-poana. Ny famoronana ny fiaramanidina fiaramanidina sy ny fanamboarana balaonina dia nanaporofo fa azo atao ny fanamoriana ny habakabaka, ary izay efa natao dia manambara fa amin'ny fotoana tsy lavitra ny lehilahy dia afaka manodina ny lalany amin'ny fahombiazana amin'ny fomba mahomby rehefa mamily ny lalany izy ankehitriny. amin'ny alàlan'ny rano. Ny sain'olombelona dia manafika haingana ny zava-tsarotra momba ny fanamoriana an'habakabaka. Saingy tsy mbola nahita ny fomba izy ary tsy afaka mifandray amin'ny fomba ahafahana manao sidina mora. Mety manidina moramora toy ny manidina ny olombelona izao ny olombelona, ​​fa raha vao nianatra nifandray sy nampiasa ny hery ampiasain'ny vorona amin'ny sidiny izy ireo. Tsy miankina amin'ny hery ara-batana fotsiny ny vorona. Antsoin'izy ireo fa hery izay tsy ara-batana ary izay ifandraisany amin'ny vatany ary manetsika ny vatany. Tsy miankina amin'ny elany ny vorona noho ny herin'ny sidina. Mampiasa ny elany sy ny rambony izy ireo ho toy ny fifandanjana na leverana izay ifandanjana ny vatana sy tarihina amin'ny alan'ny rivotra. Mety ataon'ny olona amin'ny vatany izay ataon'ireo vorona ankehitriny, na, ny olona dia afaka manamboatra milina izay ahafahany mihazo ny rivotra. Hizaha ny rivotra izy ary mahomby indrindra raha vao mianatra manamboatra sy miresaka momba ny hery izay misy ao aminy amin'ny milina manidina izay mety haoriny. raha toa ka manao izany ny olona amin'izao vanimpotoana izao dia azo inoana ary azo inoana fa nanao toy izany tamin'ny lasa ny olona. Azo inoana fa manana fahalalana ny amin'ny Atlanteans ny hery mahatonga ny sidina ary mahavita nahatonga an'io hery io amin'ny alàlan'ny vatany, ka nahafahan'izy ireo nanidina, ary nanitsy ny hery mitovy amin'ny milina an'habakabaka, noho izany dia mifehy ny sidina amin'ireto milina ireto araka ny sitrapony. Ny saina dia miverina manomboka amin'ny taona ka hatramin'ny vanim-potoana, avy amin'ny hazakazaka ara-batana mankany amin'ny iray hafa. Ny sain'olombelona dia tsy nahita fianarana ary tonga lafatra amin'ny foko iray na sivilizasiona. Ilaina ny saina mandalo na firazanana na sivily maro samihafa amin'ny fampandrosoana azy miandalana. Tsy mitombina ny fiheverana fa ny saina mihetsiketsika amin'ny fanontaniana na fampiharana ny fanamoriana fiaramanidina dia ny saina mitovy izay nifantoka tamin'ny olana tao Atlantis.
Raha namaha ny olana momba ny fiaramanidina ny Atlanteans, ary raha ireo atleta mitovy amin'ny aty Atlanteans amin'izao fotoana izao dia inona no antony mahatonga ireo olona ireo tsy haverina amin'ny laoniny hatramin'ny nanapotehan'i Atlantis sy talohan'izao fotoana izao, ary raha toa ka efa niverina tany aloha izy ireo amin'izao vanim-potoana misy ankehitriny izao, maninona izy ireo no tsy nahavita nampiakatra ny rivotra na efa nanidina hatramin'izao?
Fa ny Atlanteans no namaha ny olan'ny fanamoriana fiaramanidina dia tsy mbola voaporofo, ary tsy voaporofo koa fa misy ny Atlantis. Farafaharatsiny dia tsy porofon'ny porofo rehetra izay takian'ny siansa maoderina. Betsaka ny porofo voamarina fa nisy Atlantis, toy ireo voalaza na natolotry ny ranomasina Sargassa. Fa raha ny olombelona ankehitriny dia afaka mamaha ny olana momba ny fanamoriana rivotra, dia tsy mitombina ny fiheverana fa ny olombelona tao Atlantis dia mety ho voavaha ihany koa. Raha toa ka mitombina ny reincarnation, azo inoana fa tena azo antoka fa raha efa miaina ankehitriny sy manamboatra milina izay tadiaviny ny rivotra dia nahafantatra ny olana ara-habakabaka any Atlantis izy ireo, ary efa nihaona izy ireo matetika. any amin'ny tany maro hatramin'ny nandefasan'i Atlantis azy. Na izany aza, ny azo atao amin'ny vanim-potoana iray amin'ny sivilizasiona goavana dia mety tsy ho azo atao amin'ny fotoana hafa isaky ny sivilizasiona hafa. Tsy manaraka izany satria ny sain'ny olona iray dia namaha ny olana ara-habakabaka tao Atlantis dia tokony ho afaka manidina na manamboatra milina manidina any amin'ny vatana hafa any amin'ny tany hafa izy ary amin'ny fotoana tsy ampoizina.
Ny fanamoriana fiaramanidina dia siansa, saingy iray amin'ireo siansa ihany. Miankina ary tsy vitany raha tsy misy siansa hafa. Mandra-pahaveloman'ny siansa sasany ny lafiny ara-batana amin'ny fivoaran'ny fiaramanidina tsy afaka nahatratra. Ny fahalalana ny siansa toy ny mekanika, ny etona, simika, herinaratra, dia ilaina amin'ny fahombiazan'ny fikambanan'ny rivotra. Na inona na inona fahalalana fototra tokony hananan'ny saina momba ny fahalalany sy ny heriny ary ny fahaizany manidina, kanefa mandra-pahatongan'ny fitaovana ara-batana ary mandra-pahalalan'ny saina ny lalàna izay mifehy vatana ara-batana, tsy misy sambo na milina an'habakabaka azo atao. am-pahombiazana naorina tsara. Amin'ny vanim-potoana maoderina izao dia mbola naverina naverina jerena indray ireo siansa ireo. Raha ny vaovao nampita azy ireo na ampiharina amin'ny sidina eny an-habakabaka, dia rariny raha mihevitra fa mety ny fivoaran'ny fiaramanidina. Azo inoana fa ny manam-pahaizana taloha dia nanana fahalalana momba ny siantifika, nefa tsy nametraka firaketana an-tsoratra izahay na dia iray aza izay takiana ho porofo manaporofo fa manana fahalalana miasa momba ny siansa rehetra izy ireo, toy ny natao ankehitriny.
Ny sain'olon-tsotra iray manangana indray any amin'ny firenen'i Eoropa na Azia tao anatin'ny dimy arivo taona lasa dia tsy nahita ny fepetra ilaina hananganana fiaramanidina ary hanidina ao anatiny. Raha tsy misy antony hafa, noho ny fanavakavahana ara-pivavahana amin'ny firenena dia tsy ho nahasakana azy tsy hampiasa ny fahalalana izay mety ho nampihatra azy tany Atlantis. Ohatra: raha nesorina tsy ho eo amin'izao tontolo izao ny boky soratra rehetra momba ny siansa maoderina ary ny sasany amin'ireo namorona sy ny mpahay siansa lehibe dia ny ho faty sy hamorona indray amin'ny faritra sasany fa tsy mifandraika amin'ny sivilizasiona maoderina, ny lehibe indrindra amin'ireo siantifika sy mpamorona ireo. tsy ho afaka hiatrika ny toe-piainana nandraisan'izy ireo ny sivilizasiany sisa. Ny tena azon'izy ireo natao na dia ny fahalalana efa niainany sy nahalala ary nahavita ny zava-misy ankehitriny aza dia tsy hahavita hanao toy izany amin'ny toe-javatra niova. Ny tena azon'izy ireo natao dia ny hanao mpisava lalana. Tsy maintsy ampianarina ny olona izay nahalasa azy ireo izy ireo ho fankasitrahana ny mety ho avy, ny hahafantatra ny olona amin'ny zava-misy sasany, ary ny fanabeazana azy ireo hahalala ny fahamailoana ireo siansa. Ny fiainana iray dia tsy hamela azy ireo ny fotoana ilaina hananganana ny toe-javatra sy hanabeazana ny vahoaka hatramin'ny faniriana tombony maoderina. Raha ny eritreritry ny olona hafa ihany no tonga ao an-tsain'ny olona, ​​ary ny saina mandroso mbola tsy tonga nofo sy "mahita" ny lalàna sasany ary manatsara ny indostria sy ny fomba amam-panao ao amin'ny firenena, dia azo atao ve ny manana fototry ny asa ho an'ny sivilizasiona. Naharitra taona maro ny nanabeazana ny zanak'olombelona hianarana sy hivoatra amin'ny toe-javatra misy azy ankehitriny, taorian'ny nilentika tao anaty haizina taorian'ny faharavan'ny sivilizasiona teo aloha. Rehefa mivoaka ny haizina sy ny tsy fahalalàna ary ny fanavakavahana ny zanak'olombelona ary lasa malalaka kokoa ny saina tonga nofo, dia averina ao anatiny indray izay nisy teo amin'ny sivilizasiona taloha. Miharihary isika fa manakaiky ny fotoana hisehoana indray ny zavatra noheverina ho fahagagana, nefa nanjary zavatra ilaina sy ampahany amin'ny fiainantsika izany tsikelikely. Na dia ireo olona niaina tao amin'ny vatana Atlantean sy izay nitsangantsangana teny tao aza dia tsy maintsy nionona tamin'ny fotoana maro hatrany nanomboka tamin'ny filentanan'i Atlantis, ary na teo aza ny vanim-potoana sy ny fotoana nanakana ny fampiasany ny fahalalana ny sidina an'habakabaka, efa antomotra ny fotoana. antsoy amin'izao fotoana izao ny fahalalany ny lasa, satria efa vonona ny toe-javatra ary ho afaka hahay hifehy rivotra izy ireo ary hanidina amin'ny ho avy satria tompon'ny rivotra amin'ny fanadinoana Atlantis izy ireo.